Kindness not plastic. – bokashimyanmar.com
Kindness not plastic.
by Bokashi Myanmar May 24, 2018 June 15, 2018 Leaveacomment
( 😊အောက်မှာမြန်မာလိုပါသေးတယ်နော် )
Feeding animals with kindness not plastic! This is from our friend Lee in India, he showed us how people leave their food waste outside their houses for the cows, goats and dogs. Nice and neat, no other rubbish.
We can make bokashi out of food waste, or any kind of organic waste really, but the animals should always get the best bits!
ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အစာကျွေးနေတာ။ ပလပ်စတစ်တော့မပါ။ ဒီဗီဒီယိုလေးကို လောလောဆည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ ကျမတို့မိတ်ဆွေကြီး Lee ပို့ပေးတာပါ။
ခွေး၊ နွား၊ ဆိတ် စတဲ့သတ္တဝါလေးတွေအတွက် လူတွေက စားစရာအကျန်လေးတွေ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို သူတို့အိမ်တွေအပြင်ဘက်မှာ စုပုံထားပေးထားတာကိုပြချင်တာပါ။
အစားအသောက်အကြွင်းအကျန်တွေကနေရော၊ တခြားဩဂဲနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေပါ ကျမတို့ ဘိုကာရှီ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒါတွေထဲက ကောင်းတာလေးတွေကိုတော့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ စားရစေချင်တာကျမတို့ စေတနာအမှန်ပါ။
#bokashimyanmar #bokashi #foodwaste #noplastic
food wastebokashi, bokashi myanmar, food waste, no plastic
Previous Entry Fermented compost versus traditional compost
Next Entry Tea leaves = fertiliser